Puntland oo Bandhigtay Dhalinyaro ay ku sheegtay in ay yihiin Al-Shabaab
September 6, 2012 - Written by Boosaaso:-Waxaa galabta lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari labo dhalinyaro ah oo ay Puntland ku sheegtay in ay ka soo baxeen Buuraleyd Golis wasiir ku xigeenka wasaarada Amniga Puntland Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed ayaa galabta saxaafada kula hadlay xafiiska uu ku leeyahay magaalada Boosaaso.
Wasiir ku xigeenka Amniga ee Puntland Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed ayaa saxaafada u soo bandhigay Labo dhalinyaro oo ka soo baxay ciidanka Al-Shabaab ee ku sugan buuraleyda Golis sida uu saxaafada u sheegay wasiirku .
Labada Dhalinyarada ah ee maanta lagu soo bandhigay Boosaaso ayaa waxaa magacooda lagu sheegay Sharma’arke Cabdi Maxamed iyo Saciid Cumar Yuusuf waxayba sheegeen in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab mudo ka badan hal sano.
Ilaa haatan ma jiraan cid ka tirsan Al-Shabaab oo ka hadashay mana jiraan cid xaqiijineysa in laba dhalinyaro ee la soo bandhigay in ay ka mid yihiin Al-Shabaab marka laga reebo Maamulka Puntland.
Dowlad Gobaleedka Puntland ayaa dhowr mar oo kala duwan waxay saxaafada u soo bandhigtay rag ay ku sheegtay in ay ka soo goosteen Ururka Al-Shabaab ee ku jira Buuraha Golis waxaan ugu danbeeyey dhalinyaro ay ku soo bandhigya deegaanka Af Urur.